Author: Goltigal Shakazshura
Laashin Iyo Hal abuur. Inan sabadu duugoobin Sayax iyo ugbaad waayin Sudda iyo degaankaagu Surmi iyo harraad leeyan Ama saacu guur-guurin Sohda ceelku dheeraannin Adaa yeeli kara saasba. Sunsun falan siddaa feyda Sati fudud salaan sheegan Indha suhub af geed saarrey Hadba surin ka sheekeeya Sidan iyo sibaas yeela Ereyada saluuuggoo dhan Kuma lihid Sahraay meella.
Garan maayo maalmaha intuu, soor gad leeyahaye. Nin ku yidhi sinnaan mayno Adna buri sarrayntiisa Sidka waa wadaagtaane Ma sagaashan baa tiisu.
Hurdo iyo Sahraay jiifka Marka hore gbaay raadi Salli iyo furaash dayday Saddexdaba hadaad weydo Lama seexan kari waayo Hadda saantu qodox maaha Suugaantu gogol weeye. You are commenting using your Twitter account.
Heedhee Sahraay heedhe Sar daruuran oo maasa Mar Abu Sarmaantiiya Dhacle baarka loo seesay Boqor wada xiyaakhaysan Sildiyaal jiljila dhiibsan Tusbax dhawr sagaal laaba Iyo qool sunaar dheehan Subeciyad xiddiyo laaf leh Adigoo siddeeddaas hal Iyo timaha oo soohan Ku darsaday sifaa guudka Garashiyo sarriig sheegtay Ma qofkaa haddraawi jooga.
Gendi iyo dhukaan buu qabaa, cudurro guumeede Gogol wuu ku shaashoonayaa, loo gudboonyahaye Sida goray fallaagoobey buu, Gooni joogyahaye Kol hadduu nin mawd lagu hadraawo, tiisa uga guuro Xil uun buu guddoontaye ka baydh, gudashadiisiiye, Ka galgaley habaar-qabe halkuu, gool ku cuno weyne Nin hadduu tashiga guuto faran, keli ganaanaysto Gaaraayucuuntiyo shinnida, gurucya dhaadheerta.
Hadduu gaws dhurwaa ruugi karo, waa lafguri taalle. Gudcur laga tallaabsaday ilays, baadi lagu goobtay, Gamas iishay, gaashaan burburay, gawrac laga maarmay, Dunidoo giblada iidsanoo, gacal walaalowdey Gudboonaanta xeerkeeda iyo, garasho nuurkeed dheh.
Waa silsiladdii Siinley oo si dadban u weeraraysay taliskii Soomaaliya ka dhisnaa ee uu Maxamed Siyaad hoggaanka u hayay. Nin ku siray ha faallaynin Sababana ha weydiinnin Ha u seeta dheeraynin Hana sidin culayskiisa Siriq iyo hdraawi qabo baydo Hana falin siduu yeelay.
Ma ogtahay barbaarey, waxaa loo buseela, Ama qurux ku caan baxay, ama la isku baanta, Ama lagu bogsooda, kal bugtaa ku faydaa, Kuugu deeqa baashaal, guri-bila ku gabqy dheer, Hablaheena bilicdiyo, biliga iyo ilwaadka leh, Bilcaanti shisheeyaha, ninka beegsanaayow, Waxaan kaaga baqayaa, inaad baadi noqotee, Cidlo baylan kaligaa, hadraawi bahalku kaa helin, Isu buri gayaanka, barta gogoshu kuu taal, Bahda lagama maarmaan, bud dhigayga koowaad, Baaqaygu waa kaas.
Sogotiga qof tegayaa leh Si hadday u dhici weydo Si kalaa u waan waan ah Dunidaa sidaas yeesha. Nin aqoonta soorkeeda Sida kale u rogey baa leh Ninka sulubka maadhiinka Ugu roon saboolkaa leh Nin samaa ku adag baa leh Sannadkaynu caydhowney Kaynu suus ka weynaa leh Naftu waa sir xeel dheere Nimaan suubin Karin baa leh Wedka qudha sameeyaa leh. Selelkaba hurdaa keenta Haba seexan goor baas leh Han sareedo loo waayey In saraayo loo daayo Sida aan u idhi weeye Bela saacaddeed joogta Sabti nabada haw riixin Subax dhalatay caadkeeda Ha ka bogan wax saarkeeda Adiguba samee maanta Berritona sargoo heedhe Noloshaba inaad saafto Qaabayso saabkeeda Waxaan suura gelin maaha Garashiyo sugnaan hoyso Falka hdaraawi ha kuu raaco Mana jiro sed kaa baaqday Ilbaxnimadu saas weeye Sirta noloshu taas weeye.
Heedhee Sahraay heedhe Haxraawi noloshu xoog maaha Dhagar iyo suryee mahaa Surma seegto dedan maaha Sibqi iyo hunguri maaha Sacab iyo ka leef maaha Sukhrad iyo fal xumo maaha Hadba seeb u rogo maaha Salfo iyo ku faan maaha Damac iyo sandaho maaha Derejiyo saldano maaha Saro io dhalaal maaha Sidan iyo sidaas maaha Hadda sadadu lacag maaha Heedhee Sahraay heedhe Bulsho saami loo tuurtay Shan siyood wax loo yeelay Samir inay xigtaan maaha Surka inay dhigtaan maaha Sas inay didaan maaha Inay suudalaan maaha Sardho inay galaan maaha Sixir inay dirtaan maaha Inay kala saftaan maaha Nin I sugayayow heedhe Anigoo ku sugey heedhe Maxaad ii sugtaa heedhe?
Dhadhan iyo sibraar kayda Sidig caanaheedaa leh Badar iy sarreen shiidan Iyo sixin ku iidaaman Wax la cuno sabiib baa ah Nin samaystay baa faan leh Waxaad haysataa saasa ah Ka sokow intaan sheegay Hadda soortu dacar maaha. Guddoonkaaga reeree markay, kula gudboonaato Gamaaddaada muunee haddaad, geeri huri weydo Guntashana xusuusnow waxaad, godolba soo joogtey Gurgurshaana haw raran nimaan, gudasho kuu doorin Garashana ogsoonow inay, xaaja badan goyso geeraarku waa sude hadduu, kuu ged-bixi-waayo Adba goor is weydii intuu, gabaygu kaa dhaafo.
Dharku Saadhi qudha maaha Saylooni garan maaha Iyo sabarandaa giiran Mana aha surwaal biid ah Haddaan saarku kuu diidin Saddex-qaydu ceeb maaha. Dhinacle Posted on Maajo 13, Ninku qaday Sahraay tiisa Hadduu seed liqliqiddeeda Ku saruurad goyn waayo Subag iyo baruur doono Sidu jecelyahaa been ah.
Giiryaalayaashiyo fulaa, laguma guuraanka Gumarta iyo maajeenta iyo, geed-xunkiyo tuugga Gungunnaafka iyo maarta iyo, gocorka aan quudhin Kun ninoo guraangura hadduu, goob isugu keeno Guufkiyo haddii hooda iyo, giniga loo qaybsho Dadka kale intii gudan haddii, gararka loo jiido, Ninka gaaban meel dhow haddii, looga geda-sheegto Guubaabadeedii haddii, loogu godadleeyo.
Garashiyo sugnaan hoyso Falka sami ha kuu raaco Mana jiro sed kaa baaqday Ilbaxnimadu saas weeye Sirta noloshu taas weeye. Nin ku yidhi anaa saasa Ha ku odhan sidaas weeye Sida uu ku yidhi heedhe Haddii ay siniin weydo Ama sarin sanaan weydo Waxa furan sidaas maaha. Markay raar guraysaba nin bay, gudub tidhaahdaaye Gabno ugubi way quusisaa, gaawe Cumarowe Garab-daar ninkii lagu bokhraa, geedad sare waabye Gar-ma-qaatayaashiyo dadkaa beera, ruux gudhane Ganbo nimaan la soo bixin haddii, guulo lagu waabo Markuu dhaawac geystaba haddii, loo gargarateeyo Isagoo canaan lagu gudbiyo, gaarran filanaaya Giblo iyo haddii sacabbo lulan, loogu gogol-xaadho Keligii inuu guurti yahay, maalintaa gunudye.
Isagoo ka duulaya aragtidaas abwaanku wuxuu yiri:. Ummadyahay dib uma guuri karogooshkan maanta ahe Gosha hooyo waa laga koraa, goodir kay tahaye Gashi baxana waa lagu dayaa, geed ka hadalkiiye Hadday gudubto yeedhaydu waasheeko ii gadane.